TOVOLAHY MATY VOATSATOKA ANTSY : Olona maromaro no atao famotorana eny amin’ny polisy
Tsiahivina fa tovolahy iray vao roapolo taona monja no nisy nandroba ny findainy ny alin’ny alakamisy 28 novambra lasa teo sahabo ho tokony taminy fito ora sy sasany hariva. 3 décembre 2019
Raha iny ity zavotolahy ity handeha hanatitra ny namany iray any aminy fokontany Mahavoky, izay avy nitsangantsangana tany amin’izy ireo ny tolakandron’ny androtr’io ihany io namany io. Dia indreo nisy telo lahy araka ny voalazan’ ny nahita ny tranga no nandroba avy hatrany ny findain’ilay niharam-boina, saingy namaly moa ity farany nanenjika ireto mpangalatra. Avy hatrany dia notsenain’ireto tsy mataho-tody tamin’ny antsy ny nanandrify ny fon’ilay zatovolahy, ka dia nitsirara izy, ary dia tafatsoaka ireto olon-dratsy. Ilay finday kosa dia navelan’ireto lazaina fa nandroba ireto teo saingy efa simba noho ny fifandroritahana. Avy hatrany dia noentin’ireo nanatri-maso teny aminy hopitaly ilay voatsatok’antsy, saingy minitra vitsy taorian’izay dia tsy tana intsony ny ainy ka maty ilay zavotolahy vao roapolo taona monja monina etsy aminy fokontany Manga.
Taorian’ny fandevenana dia sesilany ireo olona voantso hakana am-bavany nanoloana iny tranga iny etsy aminy polisy Mangarivotra misahana ny fanadihadiana. Isan’izany ilay zatovovavy sakaizan’ilay zatovolahy nindaosin’ny fahafatesana sy ireo namany mpifanerasera ary ny mpiray vodirindrina tamin’ity raharaha ity. Betsaka ny resaka nifamahofaho teto Mahajanga tamin’ity tranga mahatsiravina nandatsahan-drà ary niafara tamin’ny fahafatesana ity, saingy ny valin’ny famotorana ataon’ny polisy ihany no hamaly izany.